ငပလီ တွက် ဈေးအချိုဆုံး ခရီးစဉ် – Agent Ngapali
Home>Blog>Links>Promotion Package Plans>ငပလီ တွက် ဈေးအချိုဆုံး ခရီးစဉ်
ကြိုတင် ဘိုတင်သူများ အထူး ဈေးနှုန်း နဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝအသစ်သစ်စက်စက် Guest House မှာ တည်ခိုးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
*** ၁ ည (သို့)၂ ညအိပ် ငပလီခရီးစဉ်***
အပန်းဖြေအနားယူချင်သူများ၊ ခရီးသွားရတာကိုနှစ်ခြိုက်သူများနှင့် ပင်လယ်ပြင်မှာ အပျော်တမ်း ခရီးစဉ် ထွတ်လိုသူများ တွက် ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးမျှားမယ၊် ရေကူးမယ် ၊ ရေငုပ်မယ်၊ အလှဆုံးသော ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြမယ်
ခရီးစဉ်ကတော့ ကားနဲ့ “သံတွဲ ဈေးမှ” လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဝယ် ကြမယ် မြက်စွာဘုရား ဗျာဒိတ်ပေးထားသော မြက်စွာဘုရား ရဲ့ ဓါတ်တော်မွေးတော်များ ဌာပနာထားသော “တန်ခိုးကြီး ဘုရားသုံးဆူ” နဲ့ ပျံလွန်တော်မူပီ ၃၂ ရှိသော “ရဟန္တာ ကိုယ်တော်ကြီးများအာ ဖူးမြော်နိုင်ခွင့်” ကိုလဲ အထူးစီစဉ်ထားပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့အကြိုက် Package ကို ရွေးချယ်ပါ။ Package ဖြစ်လို့ (၂ ဦးအနည်းဆုံး )ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
လှပတဲ့ Hotel, Lodge, Guest House, Private Villa တို့မှာတည်းခိုခွင့်
တန်ခိုးကြီး ဘုရားသုံးဆူး နဲ့ ဇလွန်ပျံ ရဟ္တာန် ကိုယ်တော်ကြီးမျာဖူး ခရီစီစဉ်
သံတွဲဈေး Shopping and Sightseeing
နံနက်တိုင်း Breakfast စားသုံးခွင့်
Thandwe Market with3Famous Pagodas and Zalun Monastery Trip: This is 5:00 hour Day Trip. Thandwe Market , Very famous3pagodas on the top Mountains in Thandwe and you could see really over nice view on mountain and then “To see traditional handmade spinning and weaving product factory” nearest Thandwe Market . and then leave the Thandwe market and forward to Zalun Monastery where there isahistory of 1 dead monk body. About 32 years ago. Most people believe that when you wish into the monks your wish become true. We will be going by the car about 1 hour from Thandwe market to Zalun Monastery.
ပင်လယ်ပြင် အပျော်တမ်း ခရီးစဉ် (ပုလဲကျွန်း)
(ရေငုပ်ရန၊် ငါးမျှားရန်၊ ရေကူရန် ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံ free provide/free of charge)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်တိုင်း Breakfast စားသုံးခွင့်
Boat Trip : There are two islands. The first one is Pearl Island and the other one is called White Sand Island. The cost of the boat trip is depends by the two options you choose to go. There activities that you can do such as snorkeling, fishing and free time on the island.
Prev Post3 D / 2N Packages
Next Postနှစ်ညအိပ် သုံးရက် ခရီ ကို တစ်ဦးနှုန်း ၆၅၀၀၀ ကျပ်ပါ
FESTIVALS, Links, Uncategorized
January 8, 2018 August 20, 2018
January 9, 2018 June 17, 2019
Activities, Links, Promotion Package Plans, Uncategorized